Kurwadza Kunoita Rufu: Kana Munhu Afa Zvatopera Here?
Kurwadza Kunoita Rufu
Rufu harujairiki. Vanhu vakawanda havadi kutaura nezvarwo. Asi runototiwira chete. Rufu runobaya setsono uye rwunorwadza.
Hapana chinogona kufanotidzikamisa kuti tisazorwadziwa kana tafirwa nemubereki, newatakaroorana naye kana kuti nemwana. Tinogona kungofirwa tisingafungiri kana kuti rufu rwacho rungazoitika munhu amborwara kwenguva yakareba. Pasinei nokuti runotiwira sei, rufu runorwadza uye rungaita kuti tishungurudzike zvikuru.
Antonio uyo akafirwa nababa vake mutsaona yemumugwagwa anotsanangura kuti: “Zvinoita sokuti mumwe munhu auya akakiya musha wako, obva atakura makiyi. Unenge usisakwanisi kudzokera kumba kunyange kwekanguva kadiki zvako. Dzinenge dzangova ndangariro chete. Ndizvo zvinenge zvatovapo. Ungasazvibvuma uchiti zvanga zvisingafaniri kudaro, asi hapana zvaungaita.”
Paakafirwawo, Dorothy uyo akava chirikadzi ava nemakore 47, akabva atsunga kutsvaga mhinduro. Kunyange zvazvo aidzidzisa kusandesikuru, haana kumbobvira afunga kuti kana munhu akafa zvinenge zvatopera. Asi ainetseka kuti chii chinoitika kana munhu afa. Akabvunza mufundisi wake weAnglican kuti, “Chii chinoitika kwatiri kana tafa?” Mufundisi wacho akapindura kuti, “Hapana anonyatsoziva. Tinongofanira kumirira kuti tizoona.”
Tinongofanira “kumirira kuti tizoona” here? Pane here chingatibatsira kunyatsoziva kana rufu uriwo mugumo wezvose?
Vanhu vange vachitsvaga nzira dzokukunda rufu kubvira kare. Tinogona kukunda rufu here?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kurwadza Kunoita Rufu